Myanmar COVID-19 Respond
1. Am I infected? 2. Risk Assesment Join Us
We open collaboration for
Data Ranger, Data Scientist, Apps Engineer, Mobile Designer, Communication & Public Health to join in this initiation.
What is Covid 19? Covid 19 ဆိုတာ ဘာလဲ?
Transmission - Covid 19 က ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ
အခုလက်ရှိအထိတော့ Covid 19 ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကာကွယ်ဆေး မပေါ်သေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းကတော့ ဒီရောဂါပိုးနဲ့ မထိတွေအောင် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းပါပဲ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူအချင်းချင်း ချောင်းဆိုး၊နှာချေစဉ် ထွက်သောအရည်များကို ထိတွေ့မိခြင်းဖြစ် အထိကကူးစက်တာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလို့ထိတွေ့မှုကို အဓိကထားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း (How to protect yourself)
လူဦးရေထူထပ်သောနေရာများအားသွားခြင်း၊ လူနာကြည့်ရှုခြင်း၊ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေခြင်း စတဲ့ အရာတွေ လုပ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း လက်ကို ရေ၊ဆပ်ပြာဖြင့် စက္ကန့် ၂၀ ခန့် ကြာအောင် ဆေးကြောပေးခြင်း၊ လက်သန့်ဆေးဖြင့် ဆေးကြောခြင်း စသည်တို့ကို မပျက်မကွက် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ လက်သန့်ဆေးများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း Alcohol 60% ပါဝင်သော လက်သန့်ဆေးရည်များကိုသာ ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မဆေးထားသောလက်ဖြင့် ုမျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်းများ၊ ပါးစပ်များအား ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို လုံအောင်ဖုံးအုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဖုံးအုပ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း လက်ကိုင်ပဝါထက် တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးမျိုးကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နှာချေစဉ် အသုံးပြုပြီးသော တစ်ရှူးကို အမှိုက်ပုံးထဲသို့ စနစ်တကျ ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာချေပြီး တိုင်း လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ လက်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
နှာခေါင်းစည်း ( facemask) စည်းပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စပ်ဟာ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ အတွက် မည်သည့် mask အမျိုးအစားမဆို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဖျားနာနေမယ်၊ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နှာခေါင်းစည်းကို တပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားနာမနေဘူးဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေတပ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ ခြွင်းချက်တစ်ခုကတော့ သင်ဟာ နေမကောင်းတဲ့ သူတွေကို ပြုစုပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု တစ်ဦးဦးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ လူနာနဲ့ ထိတွေ့နေစဉ်မှာ နှာခေါင်းစည်းကို စည်းထားသင့်ပါတယ်။
ထိတွေမှုများသော နေရာများအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
မကြာခဏထိတွေ့နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းသုံးစားပွဲများ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ မီးခလုတ်များ၊ လက်ကိုင်များ၊ ဖုန်းများ၊ ကီးဘုတ်များ၊ အိမ်သာများ၊ ရေချိုးကန်များ စတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ပိုးသတ်ဆေးရည် ( ဥပမာ Dettol ) ဖြင့် နေစဉ် ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များအားကာကွယ်ခြင်း (How to protect your children)
ယခုလက်ရှိ Data များအရ Covid19 ဟာ ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုဟာ လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထက် အတော်လေး သိသိသာသာလျော့နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ တွက်ထားလို့ မရတာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ လို့အပ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေကို မထိတွေ့ မကိုင်ခင် လက်ကို ဆပ်ပြာ (သို့) လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။
ချောင်းဆိုးနေသူများ၊ နှာစေးနေသူများမှ ကလေးအား လာရောက်ကိုင်တွယ်ခြင်းကို တားဆီးပါ။
ကလေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကလေးထိတွေ့နိုင်သော နေရာများအား နေ့စဉ် သန်ရှ၈်းရေးလုပ်ပါ။ ကလေးအဝတ်များအား ကောင်းမွန်ခြောက်သွေ့စွာ လျော်ဖွတ်ပြီးမှ ဝတ်ဆင်စေပါ။
လက်ရှိ တွေ့ရှိချက်များအရ Covid 19 ကူးစက်ခံရတဲ့ ကလေးတွေအနေနဲ့ သာမန်အအေးမိရင်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့သောကလေးတွေမှာ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းမျိုးနဲ့လဲ ဆက်စပ်တွေ့ ရတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို mask တပ်ပေးစရာ လုံးဝ မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာလည်း အသိပေးခင်ပါတယ်။
ကိုယ်၀န် ေဆာင်မိခင်များအားကာကွယ်ခြင်း(How to protect for pregnant and breastfeedmother)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ Covid 19 ဟာ ပိုမိုကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထေား အခုချိန်ထိ မတွေ့ရသေးတဲ့ အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ သာမန်လူတွေကာကွယ်သလိုပဲ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ မေးစရာရှိတာကတော့ Covid 19 ကူးစက်ခံရသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ သန္ဒေသားဆီ ကူးစက်နိုင်သလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ Covid 19 ကူးစက်ခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က မွေးတဲ့ ကလေးငယ်မှာ ရောဂါပိုးပါလာတာတော့ တွေ့ရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ကူးစက်ခံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ သားအိမ်တွင်းအရည်နဲ့ မိခင်နို့မှာလည်း Covid 19 ရောဂါပိုးကို မတွေ့ပါဘူး။
K -18, NWETHARKI STREET, BAYINTNAUNG PWALYON, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
Will be updated and validated after the official Government news release
Copyright © 2020 UMG Myanmar Co.Ltd
လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ ရက်တွင်း ပြည်ပသို့ ခရီးသွားဖူးခြင်း
၁၄ ရက်အတွင်း ပြင်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လာသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
နှုတ်ခမ်းများ၊ မျက်နှာများ ပြာနှမ်းခြင်း
အသက် ၆၀ အထက်
အသက် ၆၀ အောက်